Shina Atc machine machine and manufactures | JCUT
Milina Atc fialantsasatra
Dingana roa ny varavaran'ny kabinetra. Ho an'ny kafe kely sy antonony ho an'ny zavamaniry fanodinana ny lambam-pandehanana ary ny haino aman-jery dia antonony ny vokatra ary ny fahombiazan'ny fanodinana ny fitaovana dia tsy avo loatra. Tsy vitan'ny fanatsarana ny fampiasana fitaovana fotsiny izany fa afaka hisoroka ny loza mety hividianana fitaovana amin'ny vidiny avo ihany koa. Ary ny tombony amin'ny fanodinana ny tontonana varavarana ho an'ny tenanao dia ny hahafahanao mifehy ny kalitao fanodinana sy ny fotoana fanamboarana ny tenanao.
1. Ity milina ity dia mampiasa marika GDZ na HQD Air Cooling Spindle. 9kw fanapahana mahery vaika, fahita fanodinana ambony kokoa. Mampiasa ny programa fanovana fitaovana mandeha ho azy mandroso, fanovana fitaovana haingana kokoa.
2. Vitao ny motera servo, ny fitaovam-piadiana avo lenta ary ny fiara mpitondra entana, izay mahatonga ny milina mihazakazaka tsy misy feo, miaraka amin'ny feo malefaka, haingam-pandeha haingana ary avo lenta.
3. Famandrihana lasantsy matevina mavesatra (valiny vita an-tsokosoko 0,02mm).
4. Fanamoriana ny fandriana beam fandriana miaraka amin'ny fantsona misy matevina vita amin'ny rindrina sy vy matevina ho an'ny vakana. Ny rafitry ny fananganana tsanganana matetika dia tsy miova mandritra ny fotoana maharitra.
5. paompy vakoka mahery vaika, fantsona mahery. Ny famolavolana vita amin'ny paty 50MM caliber caliber, sealing tsara ny fifandraisana pipa PVC, tsy misy boaty mihazakazaka.
6. Faran-tsofina fantsom-peo mihetsika tsy misy dikany amin'ny alàlan'ny fantsom-baravarana aluminium manampy. Ny fandidiana dia marani-tsaina sy mpamonjy aina.
7. Karazana fizakan-tena mandeha amin'ny Spindle fanesorana vovoka mitambatra ary fanesorana vovoka faharoa miaraka amin'ny pusher. Ny fanatsarana saina, nampitovita toetra bebe kokoa.
8. Mampiasa lalamby Hiwin misy sisintany, marika Nice ary kalitao tsara. Momba ny fifindrana, X, Y axis dia mampiasa rack maotera tsara, Z-axis ball screw drive. Fepetra tsara ny ampahany amin'ny milina, matanjaka ary mateza.
Ity milina ity dia milina fanaka fanaka manokana fanaka manokana natao manokana nataon'ny mpanamboatra kabinetra. Izy io dia mety ho an'ny kabinetran'ny tontonana sy ny singa hafa, ny fanapahana, ny fanoratana, ny slotting, ny drill, ny tanjona, ny fitahirizana ny vidiny, ny asa ary ny fotoana. , Kabinetra amin'ny kiraro, fanaka birao, fanaka fanaka.
Longteng fahatelo taranakaLinear R8 ATC CNC Router
Faritra asa （S * Y * Z） 1220 * 2440 * 200mm (（support length 2800 namboarina custom
Hafainganam-pandeha 0-24000 / MIN
ampela Rivotra mangatsiaka GDZ 9KW
Gazety fitaovana Fitaovana 12 (manohana ny fanamboarana fitaovana 8-16）
Manompoa motor Dorna 1500W （2 in 1 mpamily）
Manompoa mpamily Manohana manasa mpamily môtô
Rafitra fanaraha-maso Taiwan syntec 60CA
Fandefasana làlana Y axis 30 metatra
Baibolin'ny baolina TBI 2510 kodiarana
fetra Natao manokana ho an'ny milina fanapaka
tariby Misoroka tariby vita amin'ny vy vita amin'ny halavany
Mandeha spee 35000MM / MIN
Mpanangona vovoka Kitapo indroa 5.5KW
Paompy vaky Ny tsingerin'ny rano 7.5KW
Ny endrika milina
Zatovo fahatelo Lonteng rafitra patent （kabinetra mifehy mahaleo tena
Firafitry ny fandriana Mavesatra ny fitsaboana fikarakarana fatin-jaza (fikorotanana tarehy dimy sy ny fametrahana ny kofehy 0.02mm)
Crossbeam rindrina fantsona matevina sy ny vy vy manenjana ny teknolojia fandriana fandriana fampihenana ny rafitry ny andry tsanganana rehetra dia tsy miova mandritra ny fotoana maharitra
Kabinetra fampiasa amin'ny solosaina Longteng patent andian-dahatsoratra, nasiana tombo-kofehy lehibe misy kabinetra fanaka lehibe
z singa singa Z axis moto lock function, Z axis motor motor support seza
Latabatra vakira Ny famolavolana patanty 50MM adsorption caliber, konody PVC fanamafisana dia tsara, aza mandeha takelaka
Fitaovana sensor Auto sensor sensor
Fametrahana toerana amin'ny famahanana Sivotra roa-fonosana fametrahana vita amin'ny silam-bolo misy tsipika aluminium
Fandroahana fiara Fenitra vita amin'ny rindrina vita amin'ny bokotra vita amin'ny aluminiera manampy hidona baraika vita amin'ny barazy
Fomba fanalefahana Fisarahana familiana vovoka automatique miaraka amin'ny fanesorana vovoka faharoa.
Previous: Ny fantsona andc cnc router
Manaraka: 1325 fitaovana fitaovana disc atc cnc router
1325 spindle efatra miaraka amin'ny linear ATC
Rindrambaiko milina boribory roa cnc